China 2 na 1 Foto muglọ Nga okpomọkụ pịa igwe factory na-emepụta | Taile
2 in 1 mug okpomọkụ pịa igwe
Nke a 2 na 1 igwe igwe na-ekpo ọkụ nwere ike ịnyefe foto ndị mara mma, okwu na iko, kwesịrị ekwesị maka ịnye onyinye, ihe ịchọ mma, nke kwesịrị ekwesị maka mgbasa ozi, onyinye, ọrụ nkwado, ihe ahaziri iche na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
1. [Easy iji rụọ ọrụ]: Automatic mmiri oge akara. nrụgide mgbanwe. -abịa na okpomọkụ mgbazi ọrụ na ọgụgụ isi audible mkpu. ọbụna ihe nrụgide na-eguzogide okpomọkụ na-adịgide adịgide ruo 230 Celsius C (450 Celsius F).
2. [Ikanam okpomọkụ egosi]: Ngosipụta okpomọkụ (na Fahrenheit) na oge n'ụzọ ziri ezi. ọnọdụ okpomọkụ: 0 - 450 degrees F; oge: 0 - 999 sekọnd. akpaka mmiri oge akara.
3. Abụọ Mug Mgbakwụnye gụnyere】: Foto Pịa # 1 3 "-3.5" dayameta (11oz), Foto ahụ e dere Pịa # 2 12oz latte mug (cone)
4. [Safety na iji]: Nke a Foto muglọ Nga okpomọkụ pịa igwe nwere yiri ogwe aka ahụ na ergonomic ụfụfụ-adịgide, idebe aka gị pụọ na kpụ ọkụ n'ọnụ mmewere.
5. [Wide applicationv]: Igwe igwe na-ekpo ọkụ nwere ike ịnyefe foto, okwu na iko, kwesịrị ekwesị maka ịnye onyinye, ịchọ mma, mgbasa ozi, ọrụ nkwado, ihe ahaziri iche na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Achịcha nri, foto ma ọ bụ eserese n'elu elu ụlọ maka mgbasa ozi, ebumnuche onyinye na nka na mmetụta etinyere.
7. [ntekwasa ahụ) Nkasi obi roba adịgide maka adị kwa ụbọchị-eji na ogologo mmepụta na-agba ọsọ.
8. [Kemeghi erughị ala ịghasa] Easy iji nweta, atụgharị ịkpụzi ukwe na-enye ohere mgbali gbanwee otú iji hụ na ezi mgbali na ọcha na-enyefe.
9. [Teflon ntekwasa ọcha] Ndị nonstick na-ebupụta gbochie enyefe si Oké, na-anaghị achọ iche iche silicone / teflon Ibé akwụkwọ.
10. nke gi, obu uzo di nma iji bawanye ahia gi.
11. [Mgbe ahịa ọrụ]: afọ ojuju guarantee.If maka ihe ọ bụla na ị na-adịghị afọ ojuju, biko mee ka anyị mara na anyị ahịa ọrụ ga-eme ike anyị niile iji nyere gị aka.
Ntinye aka 1.Power: 110V / 220V
Mgbakwunye 2.2x Mug: 3.1 "- 3.5" dayameta (9 "L x 4.5" H)
Dịka ọmụmaatụ: 3.3 "x 3.7" dị elu nnukwu iko
Mpaghara nnyefe kwekọrọ: 7.9 "x 3.8"
Latte mug mgbakwunye
3,5 "elu dayameta x 2.5" ala dayameta x 4 "elu latte mug
Mpaghara nnyefe kwekọrọ: 7.9 "top x 6" ala x 3.3 "elu
3.Okpomoku di iche: 0 - 430 Fahrenheit ogo
Oge 4: Oge sekọnd 0 - 240
5.Temperature mgbazi: -5 ~ +5 Fahrenheit ogo
Nzọụkwụ maka ibipụta foto dijitalụ gị na mug:
Nzọụkwụ 1: Were foto ma bipụta ya na sublimation ink na inkjet na ngwa nbipute n'ime akwụkwọ sublimation.
Kwụpụ 2: Bee akwụkwọ ahụ na nke kwesịrị ekwesị.
3kwụ na 3kwụ 3: Na-etinye Foto muglọ Nga n'ime igwe ka ịhazie mgbali ma wepụ ya. PLS mara na: ihe siri ike aghaghi ichota. (Ọ bụrụ na mmetụta sublimation adịghị mma, pls lelee ma ọ bụrụ na enwere mkpuchi sublimation na elu)
Kwụpụ 4: Gaa na ntuziaka anyị ma tọọ ọnọdụ okpomọkụ na oge.
Nzọụkwụ 5: Chere igwe na-ekpo ọkụ ruo n’iche ọkụ.
Kwụpụ 6: Tinye Foto withlọ Nga na sublimation akwụkwọ na na okpomọkụ ga-ada sharply.
Kwụpụ 7: Mgbe ọnọdụ okpomọkụ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ, pịa bọtịnụ Ok.
Kwụ na 8kwụ 8: Mgbe igwe uzu, were mug si.
Nke gara aga: New 5 na 1 ngwakọta ọkụ pịa igwe
8 na 1 ngwakọta ọkụ pịa igwe